Ardayda wax barata Jaamacadaha Gobolka Banaadir oo loo soo gabo gabeeyay aqoon kororsi ku saabsan cilmiga Diiniga “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Ardayda wax barata Jaamacadaha Gobolka Banaadir oo loo soo gabo gabeeyay aqoon kororsi ku saabsan cilmiga Diiniga “SAWIRRO”
Siminaarkan oo socday muddo afar maalin laguna baranayay qaar ka mid ah kitaabada Cilmiga Diiniga ah sida Tafsiirka Quraanka Kariimka, Kitaabada Axaadiista iyo sidii loogu Dhaqmi lahaa Diinta Islaamka ayna ka faa’iideysteen Qaar ka mid ah Ardayda Jaamacadaha ku yaala Gobolka Banaadir ayaa loogu talagalay in ardayda laguy baraarujiyo ahmiyadsiinta culuumta Diiniga ah.
Tababarka oo Muqdisho lagu qabtay ayaa Dhamaadkiisa waxaa shahaadooyin iyo Abaalmarino lagu guddoonsiiyay aradayda ka faa’iideystay
Madaxa siminaarka Sheekh Isxaaq Aadan Isxaaq ayaa sheegay in siminaarkan uu ahmiyad weyn u leeyahay ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwii ka faa’iideystay.
Madaxa Mu’asasada ASAFA ee gobolka banaadir Sheekh Xasan Isxaq ayaa ku booriyay arday ka faa’iideysatay siminarka in ay sii gudbiyaan waxa ay ka barteen oo ay uga faa’iideeyaan bulshada aan nasiibka u yeelan fursadan oo kale.
Sheekh Cali Nuur Xoogsade ayaa sheegay in ahmiyadoodu ay tahay in ay soo saaraan bulsho ka dhisan cilmiga maadiga iyo Diinta intuba.
Guddoomiyaha Guud ee Muasasada Sheekh Cabdicasiis Cali Xasan ayaa kula dar daarmay ardayda ka faa’iideysatay siminaarka inay ku dhaqmaan waxa ay barteen.
Shir looga hadalyay mashaariicda horumarineed ee Dalka oo lagu qabtay Muqdisho.
Ciidanka gaarka ah ee DANAB oo Howlgalo ka sameeyey qeybo kamid ah Gobollada Jubbooyinka “SAWIRRO”